कक्षाकोठा भन्दा पर वित्तीय शिक्षा लिने
Elena Fairley मा अक्टोबर 17, 2016 द्वारा लिखित।
Lending Circles गेम थ्योरी एकेडेमी अनुभव बाहिर
जैस्मिन र पाशाको मित्रता बाल्यकालमा शुरु भयो, जब ती दुई केटीहरू स्कूलको स्कूलका साथीहरू थिए। अन्तत: तिनीहरूलाई बिभिन्न मिडल स्कूलमा तोकिए र उनीहरूको सम्पर्क गुमाइन। तर ती दुई युवतीले उनीहरूको शिक्षा र भविष्यका लागि गहिरा प्रतिबद्धता साझा गरे। यो त्यस्तो गुण थियो जुन तिनीहरूलाई पुनर्मिलन गर्दछ र अन्ततः उनीहरूलाई सामेल हुन मद्दत गर्दछ खेल थ्योरी एकेडेमीको पहिलो लेन्डि C सर्कल।
तिनीहरूको पुनर्मिलन अप्रत्याशित र अनियोजित थियो। २०१ 2015 मा, जब जैस्मिन र पाशा आफ्नो वरिष्ठ वर्षहरूमा दुई अलग ओकल्याण्ड उच्च विद्यालयहरूमा थिए, तिनीहरू दुबै "आफ्नो निर्णय गणना गर्नुहोस्" मा भर्ना भए, ओकल्याण्ड नाफामुखी संग आर्थिक निर्णय गर्ने वर्ग। खेल थ्योरी एकेडेमी (GTA) उनीहरूले आफ्नो मित्रतालाई पुनः सुरु गरे जस्तो कि कुनै समय बितिसकेको छैन र समानान्तर शिक्षाको यात्रा शुरू गर्‍यो जुन उनीहरूलाई आजीवन वित्तीय सुरक्षाको लागि तयार गर्दछ।
जीटीएको उद्देश्य युवा व्यक्तिहरुलाई वयस्कतामा वित्तीय स्थिरता प्राप्त गर्न निर्णय क्षमता र आर्थिक अवसरहरुबाट सुसज्जित गर्नु हो। "आफ्नो निर्णयहरू गणना गर्नुहोस्" मा चमेली र पाशाले उनीहरूको निर्णय लिने प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँदै अभ्यास गरे र प्रत्येक चरणका फाइदा र विपत्तिहरूलाई ध्यान दिएर विचार गरे। उनीहरू अभिनय गर्न र प्रश्नहरू विचार गर्नु अघि विराम गर्ने बानी खेती गरे, "मेरो हितमा के छ? निर्णय गर्नु अघि मैले के जान्नु पर्छ? ”
चमेली र पाशालाई थाहा थियो कि यी सीपहरूले उनीहरूलाई भविष्यका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउँदछन्, जस्तै उत्तम बैंक छनौट गर्ने वा कलेजलाई तिर्ने योजना बनाउने जस्ता। तर चमेली र पाशाको सफलताको कुञ्जी - र उनीहरूको जीटीएसँग चलिरहेको सment्लग्नता - उनीहरूले भर्खरै प्राप्त गरेको वित्तीय सीपलाई अभ्यासमा राख्ने अवसर थियो। उनीहरूले यो पहिलो गरे GTA को इंटर्नशिप प्रोग्राम मार्फत, र अन्ततः Lending Circles.
आफ्नो निर्णयहरू बनाउनुहोस् पूरा गरिसकेपछि, चमेली र पाशा दुबै ईन्टर्नर भए वाह फार्म, GTA को शहरी खेती र व्यवसाय कार्यक्रम। तिनीहरू वास्तविक व्यवसायमा आफ्नो नयाँ सीपहरू लागू गर्न मौकाको लागि उत्सुक थिए। र एक व्यावहारिक स्तर मा, दुबैलाई कामको अनुभव चाहिएको थियो।
पाशाले सिक्ने र गर्नेको महत्त्वबारे कुरा गरे:
"जीटीए पेचेकहरू पाउँदा, हामी यसलाई सुरक्षित गर्ने, यसलाई बजेट गर्ने, प्रत्येक चोटि चेक प्राप्त गर्ने बेलामा १टीपी २ टी take० निकाल्ने अनुभव गर्दछौं। तपाईं कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र हिंड्न सक्नुहुन्छ। ”
चमेली र पाशाले सफलतापूर्वक आफ्नो इन्टर्नशिप पूरा गरे र उच्च विद्यालयबाट स्नातक गरे। तर उनीहरूको सिकाई सकिएन: दुबै जीटीएको "क्र्याश कोर्स इन जॉब रेडीनेस" मा तत्काल भर्ना भए। धेरै युवा वयस्कहरू जो सीधा कलेज जान्छन् विच्छेद वा स्थिर गतिविधिहरूको अराजक वेबमा फस्न सक्छन्, यी दुई प्रभावशाली युवतीले ध्यान गुमाउन इन्कार गरे। तिनीहरू आफ्नो लक्ष्यहरूको लागि प्रतिबद्ध रहे र सबै GTA प्रस्ताव को फाइदा उठाए।
جیस्मिन र पाशा जीटीएमा कार्यक्रम सुरु भएको बेला १ टीटी T टीको शंका थियो। उदाहरणका लागि, चमेली, क्रेडिटमा जोड दिन अप्ठ्यारो थियो। उनिलाई क्रेडिट बनाउनको लागि एक मात्र तरीका भनेको क्रेडिट कार्डको साथ थियो, र उनी बुद्धिमानीपूर्वक क्रेडिट कार्डको बारेमा सोच्दछन् कि अविनाक युवाहरुका लागि जोखिमपूर्ण छ।
तर Lending Circles ले उनलाई क्रेडिट निर्माण गर्ने एउटा तरिका प्रदान गर्‍यो जुन उनले विश्वास गरीन्। उनले यस कार्यक्रमको साथ उनको सान्त्वनाको वर्णन गरी: "तपाईले आफ्नो क्रेडिट सीमा नाघ्न चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि यो जहिले पनि एक निश्चित रकम हो।" पाशा पनि यस्तै क्रेडिट कार्डबाट सतर्क थिए। तर एकै साथ, उनले स्वीकार गरिन् कि क्रेडिट स्कोर नहुनु एक बाधा साबित हुन्छ:
“तपाईंलाई कार क्रेडिट प्राप्त गर्न धेरै चीज गर्न क्रेडिट स्कोर चाहिन्छ। जब तपाईं १ turn बर्षको हुनुहुन्छ र तपाईं कलेज जानुहुन्छ, सबै बैंकहरूले तपाईंलाई क्रेडिट कार्ड प्रस्तावहरू पठाउँछन् र कहिलेकाँही एपीआर उच्च हुन्छ र यसले गडबडी गर्न सक्दछ। ”
धेरै युवा वयस्कहरूको लागि औपचारिक वित्तीय लेनदेनको साथ धेरै अनुभव बिना, Lending Circles प्रतिबद्धता डराउने देखिन्छ (नियमित मासिक भुक्तानी!) र यसको मूल्य अमूर्त (क्रेडिट स्कोर, के?)। तर पाशा र जैस्मिनले कार्यक्रमको फाइदाका बारे विचार गर्न वित्तीय शिक्षामा उनीहरूको बलियो आधार बनाए। र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूले कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिताको क्रममा जीटीएसँग एक विश्वासयोग्य सम्बन्ध बनाए। त्यसैले उनीहरूले एउटा मौका लिए र लेन्डि C सर्कलमा सम्मिलित भए।
कार्यक्रम सफल थियो। जैस्मिन र पाशा दुबैले कुनै क्रेडिट इतिहासको साथ सुरू गरेनन् - १ 18 वर्षका बच्चाहरूका लागि असामान्य होइन। अब तिनीहरू प्रत्येकको 650० भन्दा बढी क्रेडिट स्कोर छ, जुन औसत सहस्राब्दी भन्दा points० अ points्क बढी छ।
तर लेन्डि C सर्कल एक क्रेडिट-निर्माण उपकरण भन्दा बढी हो - यो पैसा व्यवस्थापनको क्र्यास कोर्स जस्तै छ: सहभागीहरूले एक लक्ष्यको लागि बचत गर्नुपर्दछ, loanण चुक्ता गर्न सक्दछ, अगाडि योजना बनाउनुपर्दछ, र स्वतः भुक्तान लेनदेनको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ।
Lending Circles को लागी धन्यवाद, चमेली र पाशाले क्रेडिटको बारेमा साधारण तरीका सिक्नु पर्दैन - गल्तीहरू गरेर जुन उल्टो छ। तिनीहरू आफ्नो creditण सुरक्षित रूपमा निर्माण गर्न सक्षम भएका छन्, र यसको साथ, वित्तीय सुरक्षाको भविष्यको लागि जग निर्माण गर्न।
गेम थ्योरी एकेडेमीको अन्तिम लक्ष्य भनेको युवा मानिसहरूलाई ज्ञान र विश्वासको साथ सुसज्जित गर्नु हो जुन उनीहरूलाई नेभिगेट गर्न आवश्यक छ जुन प्रायः रहस्यमय र उच्च-दांव वित्तीय निर्णय हो।
Lending Circles अझै पनि GTA युवा संग traction प्राप्त गर्दै। तर छोटो समयमा, कार्यक्रम पहिले नै संगठनको वित्तीय क्षमता सेवाहरू गहिरो गर्न लामो यात्रा गरिसकेको छ। जीटीएको अवस्थित वित्तीय शिक्षा मोड्युलले युवा व्यक्तिहरूलाई उनीहरू स्कूलमा नचिनेका शीर्षकहरूमा पर्दाफाश गर्दछ, र Lending Circles जसले उनीहरूले सिकेको कुरालाई अभ्यासमा राख्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
चमेलीले अब चाबोट कलेजमा गणित पढ्छे, ओकल्याण्डको अपटाउनको लोकप्रिय रेष्टुरेन्टमा काम गर्दछ, र एक जना बुककीरसँग इन्टर्न्स गर्दछ। पाशाको निर्माण कम्पनीसँग सामुदायिक मामिलामा भूमिका छ र मेरिट कलेजमा अध्ययन। तिनीहरू खेल थ्योरी एकेडेमीबाट हरेक युवा वयस्कलाई चाहिने र के योग्यको साथ स्नातक गरिरहेका छन्: वित्तीय र रणनीतिक निर्णय-प्रक्रियामा कडा सीप, विस्तृत रोजगारी तयारी प्रशिक्षण, ठोस कामको अनुभव, र एक उत्कृष्ट क्रेडिट स्कोर।
हामी मध्ये धेरैजसोलाई उनीहरूलाई अर्को के हुन्छ भनेर थाहा छैन। तर तिनीहरू जे भए पनि राम्रोसँग तयार छन्।
यस पोष्टका लेखक जसमीन डियालले २०१-201-२०१ Game सम्म गेम थ्योरी एकेडेमीमा १ सय 44T को प्रक्षेपण र कार्यान्वयन सहित विद्यार्थी सment्लग्नता चलाउँछिन्। उनले बर्किलेको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट बीए गरेकी छिन् र अहिले उनी शिकागो विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति अध्ययन गर्छिन्।